Igumbi elifudumele, elikhanyayo, elihle enkabeni yeLeuven.
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Duncan
Igumbi eliphindwe kabili elifudumele, elikhanyayo nelithokomele enhliziyweni ye-Leuven, eduze kwamaKholeji eNyuvesi amaningi futhi ekubhukudeni kwezobuciko namasiko, izindawo zokudlela, amabha kanye nezindawo zokudlela. Le ensuite esesitayeleni inethezekile nendlu yokugezela yangasese etholakala esitezi sesibili sebhilidi elihle, izinyathelo ezimbalwa nje uhamba usuka e-Grote Markt, e-Oude Markt nasezindaweni eziningi ezikhangayo. Ikhishi elivamile lokuziphekela lihlome ngokugcwele isiqandisi, itiye nezinsiza zekhofi. I-wifi yamahhala. Indawo yokupaka yangasese (izogodlwa futhi ibize u-15€/d)
Igumbi leBrandnew elihlotshiswe ngesitayela elinokukhanya okuningi, elisendaweni ebucayi yenhliziyo yomlando kaLeuven (umgwaqo oseceleni weHogeschool Plein). Ingaphakathi lisanda kufakwa ngokunakekelwa okuningi, umbhede we-boxspring othokomele kakhulu, igumbi lokugezela lithole ukuthintana kwakudala ngamathayili e-travertine ase-Italy kanye netshe lemvelo.
4.58 ·145 okushiwo abanye
4.58 · 145 okushiwo abanye
Indawo yami isendaweni enhle, esiqongweni sendawo yomlando yase-Leuven eduze kwepaki elincane (Hogeschoolplein), ezitebhisini ezimbalwa ukusuka e-Leuven's Old Market nase-Muntstraat enenqwaba yezindawo zokudlela zasendaweni kanye nezinhlobonhlobo zokudla okuhlanganisa i-Belgian yangempela, isiNtaliyane, isiJapane, isiPutukezi. , amaShayina kanye nenqwaba yezindawo zokudlela ezinhle ezinobungani. Okuhle kakhulu lapho imakethe yabalimi iza edolobheni (njalo ngoLwesihlanu ekuseni), ukuhamba imizuzu embalwa nje futhi uzoba nemikhiqizo emnandi nemisha.
Njengoba ngisebenza ngokugcwele, ngingahle ngingabi lapho ukuze ngikubingelele lapho ngifika kodwa ngitholakala kalula ngeselula/(OKUQUKETHWE OKUBUZWAYO KUFIHLWE)/AirBnB/Messenger futhi ngizozama ngakho konke okusemandleni ami ukuphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kodwa ngingakujabulela ukuba nawe ukuze siphuze kusihlwa noma ngempelasonto futhi ngihlanganyele okuhlangenwe nakho okuthile.
Njengoba ngisebenza ngokugcwele, ngingahle ngingabi lapho ukuze ngikubingelele lapho ngifika kodwa ngitholakala kalula ngeselula/(OKUQUKETHWE OKUBUZWAYO KUFIHLWE)/AirBnB/Messenger…